I-Carbon eguquliwe njenge-Blade Runner yangempela ye-2018 | Izindaba zamagajethi
I-Carbon eguquliwe njenge-Blade Runner yangempela ka-2018
I-Carbon eguquliwe uchungechunge lwakamuva nolwesikhathi esizayo lapho iNetflix ibifuna ukukhanyisa inani elihle labasebenzisi. Ngokunikeza amazwibela ochungechunge siyabona masisha ukuthi linamabala amahle weBlade Runner, empeleni, singasho ukuthi icishe ibe ngeBlade Runner kuneBlade Runner 2048 uqobo.
Awukatholi ukukhahlelwa ngaphandle kweCarbon Carbon? Sizokunikeza izizathu ezimbalwa zokuthi kungani uma uthanda lolu hlobo lomculo, awukwazi ukuphuthelwa lolu chungechunge oluhle kakhulu oluthweswe umqhele iNetflix ngenxa yenganekwane yesayensi.
Uchungechunge lunemibala eminingi eheha umphakathi, okokuqala iqiniso lokuthi uchungechunge luqoshwa ngendlela yokuthi sizokwazi ukuyijabulela ngamakhono we-HDR, ngeshwa iNetflix ayibonanga kufanele ukuyifaka ekukhetheni kwayo imikhiqizo engu-4K, ngoba ku-Altered Carbon ibizobukeka kahle kakhulu.
Izinganekwane zesayensi ngefulegi: Lolu chungechunge lubandakanya ukunambitheka okuhle kwenganekwane yesayensi ehlala ivulekele ukuthi kungenzeka, okungukuthi, njengoBlade Runner, bakhuluma ngezinto ezizayo, kepha kude nokungenzeki.
Ubuhlakani bokufakelwa namandla: Nakulokhu futhi, lapha uphuza ngqo kwi-Star Wars nakuBlade Runner ezama ukubeka abalingisi abaphambili phakathi kwamandla angaphezu kokubonga okujwayelekile ezintweni ezizayo zesikhathi esizayo.
Ukutshalwa kwemali emiphumeleni ekhethekile emangalisayo: Ngokujwayelekile kwe-blockbuster, ngeke uthole umehluko phakathi kwalokho okwenziwa yikhompyutha nokuyimvelo, iNetflix ibinakekele kakhulu imininingwane (njengakuStranger Things) futhi imiphumela iyamangalisa.
Isikripthi esizokugcina unamathele esikrinini.
Ngaphandle kokungabaza, uma uthanda inganekwane yesayensi futhi ungakaze uyibone i-Altered Carbon okwamanje, yisikhathi esifanele, thatha isitsha sakho se-popcorn, isoda yakho oyithandayo bese uzama kwiNetflix.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » I-Carbon eguquliwe njenge-Blade Runner yangempela ka-2018
UFedora unesisombululo sokwengeza ukusebenza kwebhethri le-laptop yakho ngama-30%
I-Pornhub ivimbela konke ukujula kwabalingisi abadumile abenziwe nge-Artificial Intelligence